Veneer peeling machinery vagadziri - China Veneer peeling machinery Factory & vatengesi
Chokurukisa huni peeling muchina muchina ndiyo midziyo mikuru yekugadzirwa kweplywood, iyo inogona kukwenya danda racho kuti riwedzere kuve rakadzikama uye nenzira kwayo. Inogona kushandiswa kubvisa mhando dzakasiyana dzehupamhi huni huni. Ukobvu hwenyanzvi hunogadzirwa nemuchina uyu hwakafanana uye pamusoro pacho panotsvedzerera kana ichienzaniswa neshinda isina kupfuma. Nekuda kwekukwirira kwaro pakukora mishini yakawanda inoshandiswa kumeso kufema kumeso zvinoreva kushoma kwekukora. Asi inogona kushandiswa kuburitsa yakakwira ukobvu veneer zvakare. Vaviri vari kuwana zvibereko zvakanaka.
Yakazara otomatiki yekumhanyisa veneer yekugadzira tambo inoshandiswa kune akasiyana maipamhi ehuni peeling uye inoenderana kugadzirisa. Ingoda munhu mumwe chete kuti ashande. Inochengetedza yakawanda mutengo wevashandi. Panguva imwecheteyo, hapana kumira mukugadzira, saka zvinobuda zvakawedzera zvakanyanya. Zvakare, iyo yekukanganisa mwero yakanyanya kuderera.
2700mm spindleless yakakwira spidhi yehuni veneer peeling muchina unorema basa rehuni peeling lathe, shandisa yehuni rakaoma uye softwood zvese zviri zviviri, zvakadai seeucalyptus, birch, paini uye poplar. Iko pamusoro peiyo veneer yatinowana ichave yakapetwa padivi kumeso uye ukobvu huchave kunyangwe kwese kwese. Zvinoenderana nemutengi kudiwa, isu tinogona kuita yakamisikidzwa yekumhanyisa modhi uye yekumhanyisa-inogadziriswa modhi. Ose ari maviri mamodheru ari kuwana kuita kwakanaka uye kurumbidzwa kubva kune vatengi.
Iyo 8ft peeling muchina inotengeswa zvakanyanya kuTurkey, Indonesia, Russia neUS nedzimwe nyika. It’Yakarumbidzwa kwazvo nevatengi vese ava. Tine zvitupa zveEC. Uye SGS ichagoverwa kana mutengi achida.
Log kutenderera debarker inoshandiswa kubvisa paganda reganda uye kuita iro dhi rakasvibirira kuve rakatenderedza, mushure mekumaka zvichange zviri nyore kune iyo peeling lathes kuti ibvise uye iyo veneer ukobvu ichave yakatomboita pasina kusiyana kukuru, zvakare inogona kuwedzera peeling lathes ichishanda hupenyu.
Ukanyatsotarisisa peeling And Cutting Machine
Isu tinonyanya kukurudzira yedu yazvino modhi yeasina kusimba huni peeling muchina, kaviri roller kutyaira modhi. Kufananidza nemuchina wekuruka huni peeling muchina, uyu mushando zvakanakira ndezvekuti diki dhayamiti matanda hapana dambudziko rekubvisa uye zviri nyore kushandisa uye kupuruzira kumhanya kunokurumidza.
Yekumhanyisa veneer stacker, inogona kudzikisa zvakanyanya mutengo wevashandi uye nekuvandudza kugona kwekugadzira, isu tine akatiwandei mamamodeli aunosarudza, senge, roller mhando, yekumanikidza ndiro mhando, uye yepamberi adsorption mhando. Huru hukuru hweiyo stakcer ndeye 4ft uye 8ft. Uye isu tinogona kuita imwe saizi sekudikanwa kwevatengi zvakare.